चिनियाँ टोली किन आयो नेपाल ? -TokyoNepal.com
Friday, 06 December 2013Nepal Time: 07:37 AMJapan Time: 10:52 AM
चिनियाँ टोली किन आयो नेपाल ? ११ अगष्ट, काठमाण्डौ । नेपाल-चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन चिनियाँ उपविदेशमन्त्री फू डङ नेतृत्वको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल शनिवार काठमाण्डौ आइपुगेको छ । चार वर्षपछि पहिलोपटक हुन लागेको परामर्श बैठकमा भाग लिन चिनियाँ टोली विनेपाल आएको हो ।
बैठकमा द्धिपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा ६ महिनाअघि भएको चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओको नेपाल भ्रमणका सिलसिलामा भएका सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य, लगानी, सीमा सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, जलविद्युत र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल हुने वताइएको छ ।
नेपाल-भारत दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ११ वर्षपछि सन् १९६६ मा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने उद्धेश्यका साथ संयन्त्र गठन भएको हो । प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ ।